हुँदैन, सकिँदैन, होला र ? भन्ने सोच त्याग्न प्रचण्डको अाग्रह - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
हुँदैन, सकिँदैन, होला र ? भन्ने सोच त्याग्न प्रचण्डको अाग्रह
प्रकाशित मिति: १ माघ २०७४, सोमबार
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हुँदैन, सकिँदैन, होला र ? भन्ने सोच त्याग्न सबैलार्इ आग्रह गरेका छन् । अाज साँझ काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले भने, ‘हामीले दश वर्षका मध्यम स्तरको मुलूक बनाउने संकल्पसहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्‍यौं । घोषणापत्रप्रति हामी पूर्ण प्रतिवद्ध छौं ।’
वाम गठबन्धनको घोषणापत्र हेर्दा केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि सबैले संकल्प गर्दा सबै कुरा सम्भव हुनेमा उनले जोड दिए । अाफुले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव गरेको पनि उनले बताए ।
उनले लोडसेडिङको उदाहरण दिँदै भने, ‘हामीले संकल्प गर्दा आर्थिक वृद्धिदर ७.५% पुग्यो, लोडसेडिङ हट्ला भन्ने कसैले कल्पना गरेको थिएन । तर, हट्यो । आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक दिशामा गए ।’ उनले बन्द, हड्ताल नहुँदा देशको अर्थतन्त्रले गति लिएको बताए ।
‘मधेशको समस्या सजिलै हल होला भन्ने कल्पना गरिएको थिएन । तर, हामीले संकल्प गर्‍यौं र सफल पनि भयौं,’ उनले भने, ‘हामी नेपालीमा हुँदैन, सकिँदैन, होला र ? भन्ने सोचले घर गरेको छ । हामीले लामो सयमदेखि त्यही तालिम लिएका छौं । तर, त्यो सोच बदल्नुपर्छ । सकिन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने सोच र भावनाको विकास भए मात्र देश विकासले गति लिन थाल्छ ।’
उनले एमाले-माओवादी एकतालाई वस्तुगत परिस्थितिको आवश्यकताको रुपमा प्रस्ट्याए । ‘वस्तुगत परिस्थितिले एमाले–माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्यायो । अब अलग–अलग पार्टीको रुपमा रहनुपर्ने औचित्य रहेन’ प्रचण्डले भने, ‘शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाकै आधारमा समाजवादी क्रान्तिको दिशामा जाने कुरामा २ पार्टी एक भइसकेपछि अलग बस्नुको औचित्य पनि छैन ।’
उनले दुई पार्टीको फरक पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्दै भने, ‘इतिहासमा एमालेले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा योगदान गर्‍यो, माओवादीले सशस्त्र संघर्षबाट समाज रुपान्तरणमा भूमिका खेल्यो । हाम्रा भूमिका एकअर्काका पुरकका रुपमा रहेका छन्, त्यसैले एकतामा कुनै समस्या छैन ।’ अहिलेको एकता वस्तुगत आवश्यकताका दृष्टिले औचित्यपूर्ण रहेको उनले स्पष्ट पारे ।